သင့်ရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေကို မျက်နှာတပ်ပေးမယ့် Cool Finger Faces – Photo Fun! – AsiaApps
December 22, 2017 December 22, 2017 MoonReviewsNo Comment on သင့်ရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေကို မျက်နှာတပ်ပေးမယ့် Cool Finger Faces – Photo Fun!
မိတ်ဆွေရဲ့ Photos တွေကို edit လုပ်ရတာမောသွားပြီလား။ မောသွားရင် လက်ချောင်းလေးတွေကို ပြောင်းပြီး edit လုပ်ကြည့်ကြရအောင်နော်။ ဒီapplication က မျက်နှာကို မဟုတ်ပဲ လက်ချောင်းလေးတွေကို ရယ်စရာပုံလေးတွေဖြစ်အောင် edit လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ အရမ်းချစ်စရာကောင်းပြီး မိတ်ဆွေရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေကို မျက်နှာလေးတွေ၊ လက်ချောင်းလေးတွေ၊ အင်္ကျီလေးတွေ၊ accessories လေးတွေ နဲ့ ဆံပင်လေးတွေ တပ်ပေးနိုင်မှာပါ။
Phone camera ထဲမှာရှိတဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေပုံ ယူပြီး edit လုပ်နိုင်သလို ချက်ချင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးလည်း အလွယ်တကူ edit လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Edit လုပ်နိုင်တဲ့ ဒီဇိုင်းပေါင်း ၁၈၀ ကျော် ပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် မိတ်ဆွေစိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ပြီး edit လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်တိုင် ဒီဇိုင်းတွေရေးဆွဲပြီးတော့လည်း edit လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အရမ်းကို လန်း တဲ့ မျက်နှာပုံစံလေးတွေနဲ့ ဒီဇိုင်းလေးတွေကို ထည့်သွင်းပေးထားလို့ လက်ချောင်းလေးတွေက အသက်ဝင်နေမှာဖြစ်တယ်။ File size လည်း တအားမကြီးပဲ 31.7 MB ပဲရှိလို့ သုံးရတာအရမ်း အဆင်ပြေပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၂ရက်နေ့ကမှ နောက်ဆုံး update ထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ version က 2.0 ဖြစ်ပါတယ်။ Android အတွက်တော့ အသုံးမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ IOS အတွက်ပဲ အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ အရမ်းချစ်စရာကောင်းပြီး မိတ်ဆွေကို ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်တဲ့ application ဖြစ်တဲ့အတွက် download လုပ်ပြီး လက်ချောင်းလေးတွေကို အသက်သွင်းဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
Free to download ဖြစ်ပါတယ်။ IOS version 10.0 နှင့်အထက်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ iPhone X အတွက်လည်း အသုံးပြုလို့ရနေပါပြီ။
Image Source – Cool Finger Faces – Photo Fun
လှပတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို အရောင်ခြယ်နိုင်မယ့် Colorfy: Coloring Book